Ukusiza abanye, ikakhulu uma bengakaze behlelwe are xega ngasizathu simbe uyisipoki, bathuka encomekayo nje kuphela kodwa futhi amandla njalo lomphakathi. Amashwa kungenzeka kunoma ubani, ngakho-ke kubalulekile ukuthi uma kwenzeka ukuthi eziningi abantu sebekufanelekela ukusiza. Usizo olunjalo kungaba kokubili impahla kanye nezimilo. Lokhu, njengoba umthetho, bekwi ezihlukahlukene izinhlangano ezisiza, kodwa kuhle uma wonke umuntu ngakho empatichen ukuthi ilungele uphendule ucingo kucelwa usizo bebodwa.
-Charity - kunjalo term ebanzi ukuthi kunzima ukuchaza konke ohlobene ke. Ngaphansi kwesiqubulo esithi "Umusa uyosindisa emhlabeni!" yabamba wokuqongelela izimali kule ukunakekelwa inhlangano abanomdlavuza, ukwelapha izifo ezithile, izingubo qoqo amakhaya zezingane, kokudla kwezilwane nokunye .. Ngokwesibonelo, hhayi kudala e laseDnepropetrovsk umkhankaso lapho izisebenzi zokuzithandela walungisa ukudla okumnandi sondle abangenamakhaya emini . Abantu abangaphezu kuka-50, abenza i-isikhathi eside abawubonanga ashisayo, zithole ukudla. Ngeshwa, lesi senzo sesidlulile, futhi abantu baye bahlala e isimo abantu abangenamakhaya, njengoba kukhona inombolo encane kakhulu labo abahlala ezikhungweni zabangenamakhaya yalolu hlobo. Kodwa namanje ...
Ukuze izilwane ehlangeni ihlelwe zokukhosela. Ezinye zazo khona amakhaya abavamile yangasese, futhi ngezinye izikhathi e amafulethi. Amavolontiya ekubeni kunesidingo izilwane, wahlanganyela edonsa abantu ukuthenga feed bese iqhaza empilweni yokukhosela, kanye Into esemqoka - funa labo abazimisele ukuthatha izilwane ngokwabo unomphela noma okungenani ngokweqile. zokukhosela abaningi bavumelana imitholampilo wezilwane izaphulelo kuma amasevisi. Phela izilwane kaningi efile nasemigwaqweni, okuyinto ebizayo kakhulu ekwelapheni ngisho ingxenye yesithathu yazo. Ngo ukuxhumana nomphakathi ngamaqembu lapho izithombe ukusabalala namakati abalimalayo dengwane futhi izinja ukuzwakala. On ngamunye wabo uzozala ie-isikhwama, okuyinto ifisa ukudlulisa izimali. seqembu samasonto onke owenza isitatimende mayelana lapho imali wahamba, ukuhlinzeka amasheke. Futhi, amavolontiya banikezwa ithuba ukulethe ukudla nendawo yokuhlala nezinye izinto ezidingekayo, amashampu ngoba izinja, ngezintambo. Ngoba umusa uyosindisa izwe kuphela uma abantu ngokwabo uyayifuna.
Lapho sikhuluma ngalokho umculo kusho lukhulu wonke umuntu emhlabeni, senza kuwo libe nencazelo ehluke. Ngoba umuntu ukulalela umculo - kuba ngokwenkambiso yemihla ngemihla, okuyinto ongathanda hhayi zinikwe kakhulu. Futhi umuntu emhlabeni imisindo nemijikelezo kuba ifasitela yangempela ekuphileni. Ngokwesibonelo, ngokuvamile kakhulu oyimpumputhe kusukela azalwa izingane ukuchitha kusihlwa umculo classic. Kuyo bathola ukuthi abukho nabo izikhathi ezahlukene zokuphila kwakhe - ngokuvumelana nomunye. Akumangalisi ukuthi umculo ngeke ngisindise izwe. Ongoti True - bomculo, abahlabeleli, babashayeli - baqonde ukuthi bangakwazi abambe isithakazelo umuntu, kanye bafuna abanye lokho. Maestro uyakwazi ugqozi sendoda ekulungeleyo ukuphonsa ithawula ngenxa vicissitudes ukudalelwa, isinyathelo esilandelayo enyuka. Umculo kushintsha isimo sethu, ikuvumela ukuba dream, dala futhi isebenze. Lokho, ngaphandle kwakhe, ngakho kungathinta umcabango wengane? Umculo uyakujabulela futhi kwenza izwe sihle, kube okuhlanzekile futhi uqina.
Kudala, "The Beatles" wabhala ingoma yakhe edumile ethi "Konke okudingayo uluthando". Yiqiniso, yini enye kudingeke ngakho kunendoda? Uthando ngeke ngisindise izwe, ngoba lokho kwenza ukuba umuntu abanamandla nababuthaka ngesikhathi esifanayo, amabutho ukuba ngcono omunye umuntu, ukuthi uvusa sokukhathalela. Okungenani manje eyaziwa band "Muse", futhi, unokuningi akushoyo ngale umuzwa. "Uthando zonke ukuzabalaza", - Bahlabelela kwelinye amathrekhi. Futhi lokhu futhi uthando lweqiniso - Ukumelana yethu kuphela usenza sihluke izilwane nezinye njengathi. Njalo umuzwa abunakuqhathaniswa futhi eyingqayizivele. Uthando lweqiniso okuthwala ngokusebenzisa ukuphila, futhi kuphela ukuhlobisa wakhe "aphakathi", futhi wenze nabantu ababemzungezile kangcono. Ukunakekelwa ngobubele komunye umuntu, ukuzinikezela, ukuqonda nokuhlonipha - isiqinisekiso uthando ujabule. Ngenxa yalesi umuzwa kuba umndeni, Ngokuqhubeka uhlanga lwesintu. Mayelana abathanda ukubhala ezingaphezu kuka iculo netinkondlo, kodwa futhi izincwadi, egcwele nefilosofi nalabakufundze emphilweni. Kuyinto umthombo oyinhloko ugqozi abantu zokudala.
Izingane ngeke ngisindise izwe
Ekhuluma uthando nokuzala, angeke kushiwo mayelana ukubaluleka izingane. Uma bethi le nkulumo kanje: "Izingane uyosindisa izwe" (isithombe on isihloko lesi siqubulo, by the way, kukhona eziningi kakhulu), ibhekisela yokuthi babeka amathemba amakhulu. njalo abazali bacabanga ukuthi ukuphila kuyoba inzalo yimpumelelo kuka izingane zabo siqu musa ukuphinda amaphutha abo. Kuyinto edabukisayo, kodwa ngokuvamile kakhulu lokhu okulindelekile kungafinyelelwa kuyo. Noma kunjalo, ukuhlanzeka nobumsulwa babantwana ukucabanga kwabo kusivumela ukuthi umusa uyosindisa izwe, uma umusa yezingane. Ngemva ukubonisa zabo ngimnene ngobuqotho ukuze ithinta hhayi abazali kuphela, kodwa futhi bonke abanye. Ngakho wadala ezihlukahlukene imibukiso lapho izingane uthi lokho abakucabangayo nezindaba ezinhle ezinjengothando, ubungani, umshado, umkhaya. izimpendulo zabo ziyisiliva kanyekanye funny futhi ethinta inhliziyo. Ukuthi izingane ukwenza umhlaba sihle futhi enomusa.
Umqondo lokushisekela ubuzwe uye eside uhlanekezelwe. Ngeshwa, isizukulwane esisha akakholelwa ezweni labo. Lokhu kuyabonakala uma sibheka izibalo olunikezwa izinhlangano zomphakathi ngonyaka. Ngaphambili, Patriots babe abantu abaningi ahlonishwe amasiko impumelelo yezwe labo. Ngakho-ke izenzo ezilungile kakhulu nomphakathi ukuthi ukwandisa ezingeni yisakhamuzi nokushisekela izwe labantu. Isiqubulo "Russia ngisindise izwe!" kudingeka sibone okungalé akuyona bokubanga engenanto, nezikhuni esenzweni. Ukwandisa siqu ezingeni kwamasiko, imfundo kanye erudition kuphela neqhaza isixazululo sale nkinga ebalulekile isikhathi sethu. Ngaphezu kwalokho, ukuze uveze wokushisekela izwe kufanele kube kusukela ebuntwaneni.
ukuthuthukiswa lokushisekela ubuzwe
Okokuqala, izinto eziyisisekelo komphakathi wabeka ingane encane umndeni. iyunithi yezenhlalakahle sikhungo lokuqala lapho kwakhiwa ubuntu is yezakhamuzi esizayo. Uma kusukela ekuqaleni ukuba ugqozi ingane ukuthi konke awujabuli ezinye izinkinga setepolitiki kuleli zwe, uyobe ukuthuthukisa banombono ongemuhle mayelana lenkaba. Ngakho-ke, ngisho etafuleni umndeni kuyinto ukukhetha inkulumo ukuhlola umnqopho kwenzekani emhlabeni. Kumele wabuye wagcizelela izinzuzo isimo samanje isimo, ukukhuluma ngomlando ocebile.
Isiqubulo "Londoloza Sezwe ': Isithombe
Ngezinye Imininingwane imithombo ehlukahlukene ungathola izihloko eziningi ngendaba esiza abantulayo. Bonke benza abantu bacabange ukuthi mhlawumbe izwe liye ngempela baba baphikise kakhulu, futhi kuba isikhathi sokwakha kabusha izindinganiso zokuziphatha nezimiso zokuziphatha. Kungaleso sikhathi kuphela lapho umusa uyosindisa umhlaba ubuso ilungu ngalinye elisha umphakathi, lapho wonke umuntu uzobe ecabanga okuhle ovamile. Hippie zazingezimbi ngakho, lapho kukhulunywa ngalo ukuthula emhlabeni, nje izenzo zabo zazingamukeleki uhlamvu okunengqondo.
Manengi izithombe nezithombe kumanethiwekhi asikhumbuza ukuthi izwe kuyinto enhle, futhi kufanele enze wonke umzamo ukuqiniseka ukuthi sekuyinto ongcono kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukuba nethemba lokuhle kanye nomuzwa ubunye abahlebayo lezi zithombe ayikwazi ukuphakamisa isimo. On umkhuhlane, ekuseni zemvula, ungakwazi ukubheka isihenqo ifoni yakho ephathekayo, lapho amehlo womntwana iyobheka wena ubambe isandla sakho, futhi uzobe ngokushesha ethulwe umthwalo. Uma wonke umuntu uzolwela esiza abantulayo nezenzo elula ezinhle, lokho esiyikho ngempela ngisindise izwe.
Anthology wefilosofi emhlabeni. lasendulo East
Umshwalense Private nezinhlobo zayo
Amasevisi ezimali Professional
Dislocation we iqakala: Izimpawu kanye Ukwelashwa